कोपा अमेरिका : उपाधि दाबेदार अर्जेन्टिना र ब्राजिल सेमिफाइनलमा भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबल समाचारकोपा अमेरिका : उपाधि दाबेदार अर्जेन्टिना र ब्राजिल सेमिफाइनलमा भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा बुधवार बिहान आयोजक ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबीच पहिलो सेमिफाइनल खेल हुँदैछ । उपाधि दाबेदार मानिएको ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबीचको खेल बुधवार बिहान ६ बजे सुरु हुनेछ ।
विश्व फुटबलमा छुट्टै पहिचान छाड्न सफल दुई टोलीबीचकाे प्रतियोगिता फाइनल खेल भन्दा उत्कृष्ट हुनेछ ।
जारी प्रतियाेगितामा दुवै टोली उपाधि दाबेदार हुन् । यी दुई टोलीबीचको भेट फाइनलमा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समुह चरणको खेलमा बिजेता बनेको ब्राजिल र उपबिजेता बनेको अर्जेन्टिना क्वाटरफाइनल खेलमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्दै अन्तिम चारमा प्रवेश गरेका हुन् । दुबै टोली एकअर्कालाई पराजित गर्दै उपाधिनजिक पुग्ने योजनामा छन् ।
घरेलु दर्शकको समर्थनमा मैदान उत्रने ब्राजिल उच्च मनाेबलमा छ । समुह चरणको खेलमा कमजोर देखिएको अर्जेन्टिनाकाे पाेजिस तुलनात्मक रूपमा कमजाेर छ ।
विश्वचर्चित खेलाडी लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा मैदान उत्रने अर्जेन्टिनामा सर्जियो अगुएरो, एन्जल डि मारिया र पाउलो डिबालालगायत स्तरीय खेलाडीहरु छन् ।
जारी प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी चल्न सकेका छैनन् । समुह चरणको खेलमा १ गोल गरेका उनले अन्य खेलकाेप प्रदर्शन सम्झन लायक छैन् । सेमिफाइनलमा मेस्सीको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहने अर्जेन्टिनाको अपेक्षा छ । प्रतियोगितामा आफ्नो प्रदर्शनलाई लिएर सन्तुष्ट नरहेको स्वीकार गरिसकेका छन् ।
अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक लिओनल स्कालोनीले सेमिफाइनल खेल रोमाञ्चक हुने बताउँछन् । अर्जेन्टिनाकाे सञ्चार माध्यममसँग कुरा गर्दै उनले ब्राजिललाई पराजित गर्न तयार रहेपनि उसैकाे घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दा तुलनात्मक रूपमा केही दबाब रहने बताए ।
पहिलो सेमिफाइनल खेल बुधबार बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेल्दा दोस्रो सेमिफाइनल खेल बिहीबार चिली र पेरुबीच हुनेछ । प्रतियोगिताको फाइनल खेल जुलाई ८ तारिखका दिन हुनेछ ।